Guardiola oo ka hadlay sababta uu keydka uga soo tagay Aguero kulanka Swansea City – Gool FM
Liibaan Fantastic February 5, 2017
(Manchester) 05 Feb 2017 Tababare Pep Guardiola ayaa keydka uga soo tagay Sergio Aguero kulankii labaad oo xiriir ah, taas oo mugdi siigalinaysa mustaqbalkiisa.
Guardiola ayaa weerarka kooxdiisa ku soo bilaabay weerar yahankiisa cusub ee Gabriel Jesus kaas oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay kulankii West Ham United.
Pep ayaa sheegay in weerar yahanadii uu ku soo bilaabay 2-dii kulan ee u danbeeyay ay si fiican u ciyaareen isla markaana ay dhaliyeen goolal badan taasna ay keentay inuusan waxba ka badalin weerarka kooxdiisa.
“Labadii kulan ee u danbeeyay, weerar yahanadii ciyaaray sifiican ayeey u ciyaareen, waxayna dhaliyeen goolal badan, sidaas darteed waxaan go’aansaday in iyagu ay ku soo bilowdaan” ayuu yiri tababare Pep Guardiola.
GOOGOOSKA: Manchester City vs Swansea 2-1 (Shaxda sugan)